Tantara: Karazan-tsakafo Vaovao Iray - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
AZONAO lazaina ve izay alain’ny olona eo amin’ny tany? Sahala amin’ny fanala izany, fotsy ary manify sy mivongambongana. Tsy fanala anefa izy io, fa zavatra ﬁhinana.
Vao iray volana izay no nandaozan’ny Israelita an’i Ejipta. Any an’eﬁtra izy ireny. Kely ny sakafo naniry tany, ka dia nitaraina ny olona hoe: ‘Aleonay novonoin’i Jehovah tany Ejipta. Fara faharatsiny dia nanana ny sakafo rehetra nirinay izahay tany.’
Ka dia hoy i Jehovah: ‘Indro, Izaho handatsaka mofo avy any an-danitra.’ Ary izany no nataon’i Jehovah. Ny ampitso maraina, rehefa hitan’ny Israelita io zavatra fotsifotsy nilatsaka io, dia nifanontany izy ireo hoe: ‘Inona itony?’
Hoy i Mosesy: ‘Itony no mofo izay nomen’i Jehovah ho ﬁhinanareo.’ Nantsoin’ny olona hoe MANA izany. Sahala amin’ny mofomamy natao tamin’ny tantely ny tsirony.
‘Tokony hanangona araka izay lanin’ny tsirairay ianareo’, hoy i Mosesy tamin’ny olona. Toy izany no nataony isa-maraina. Avy eo, rehefa nihanafana ny andro, dia niempo ny mana tavela teny amin’ny tany.
Hoy koa i Mosesy: ‘Tsy misy olona tokony hitahiry mana ho an’ny andro manaraka.’ Tsy nihaino anefa ny sasany tamin’ny olona. Fantatrao ve izay nitranga? Ny ampitso maraina dia feno olitra ny mana izay notehiriziny ary nanomboka namofona!
Nisy andro iray tamin’ny herinandro anefa izay nilazan’i Jehovah tamin’ny olona mba hanangona mana avo roa heny. Ny andro fahenina izany. Ary nasain’i Jehovah nitehirizana hatramin’ny andro manaraka izany, satria tsy hampilatsaka amin’izany izy amin’ny andro fahaﬁto. Rehefa nitahiry mana hatramin’ny andro fahaﬁto izy ireo, dia tsy niteraka olitra izany ary tsy maimbo! Fahagagana hafa iray koa izany!
Nandritra ny taona rehetra naha tany an’eﬁtra ny Israelita, dia nofahanan’i Jehovah tamin’ny mana izy ireo.
Eksodosy 16:1-36; Nomery 11:7-9; Josoa 5:10-12.
Inona no fahagagana nataon’i Jehovah, rehefa notehirizina ho an’ny andro fahaﬁto ny mana?
Nahoana isika no mila manaja ireo lehilahy notendren’Andriamanitra eo anivon’ny ﬁangonana kristianina, araka ny Eksodosy 16:8? (Heb. 13:17)
Ahoana no nampahatsiahivana isan’andro an’ireo Israelita tany an-tany eﬁtra, fa nila niantehitra tamin’i Jehovah izy ireo? (Eks. 16:14-16, 35; Deot. 8:2, 3)
Firy taona ny Israelita no nihinana ny mana, ary nahoana izany no ﬁtsapana ho azy ireo? Inona no ianarantsika avy amin’io ﬁtantarana io? (Eks. 16:35; Nom. 11:4-6; 1 Kor. 10:10, 11)